#ZIDANE AYAA LA DAGAALAMAYA INUU BADBAADIYO SHAQADIISA IYADOO REAL IYO RONALDO AY MAR KALE KU GUULDAREYSTAAN | Get Latest News From Horn of Africa |
Home Somali #ZIDANE AYAA LA DAGAALAMAYA INUU BADBAADIYO SHAQADIISA IYADOO REAL IYO RONALDO AY...
#ZIDANE AYAA LA DAGAALAMAYA INUU BADBAADIYO SHAQADIISA IYADOO REAL IYO RONALDO AY MAR KALE KU GUULDAREYSTAAN
Tababaraha Reer Faransiis ayaa cadaadiskii saarnaa uy sare uu sioi kacaya ka dib qaab ciyaareed kale oo niyadjab leh iyo guuldaro kale oo ka soo gaarta La Liga Maanta, waqtigan oo uu la ciyaarey Villarreal, Dhibaatooyinka Real Madrid ee ku sugan guri ama nool ayaa sii socoda.
Kooxda Zinedine Zidane ayaa guul darro 1-0 ah kasoo gaartay Villarreal garoonka Santiago Bernabeu sabtidii, taasoo ka careysiisay Los Blancos xili ay ka sii hooseyneyso horyaalka La Liga kalinta ay hadda ku jirto, iyo ciyaaryahanka reer France oo u dagaalamaya shaqada qeybtii labaad ee xilli ciyaareedka oo shajki laga mujiyey sii joogistiisa.
Kooxda Zidane ayaa ku guuldareysatay inay garaacdo Valencia, Levante, Betis, Tottenham, Fuenlabrada, Barcelona iyo Numancia xili ay kula ciyaareen gurigooda 2017-18, waxaana haatan Villarreal uu noqday kooxda seddexaad ee booqda (ka dib Barca iyo Betis) inay ka tagaan garoonkooda Caanka ah iyagoo guuleystay xilli ciyaareedkaan .
Haddii Barca ay garaacdo Real Sociedad Axada, Madrid ayaa la lambarka 17ka dhanka dhibcaha ee horyaalka, iyadoo aan hsaki la gali karo in ay hubin inay dhameystirto afarta kooxood ee ugu sareysa, sababtoo ah Villarreal ayaa haatan hal dhibic uun ka dambeysa kaalinta shanaad iyaago ku jiraa.
Tani waxaay aheyd xilli ciyaareedkii ay Madrid ku talo jirtey inay hoggaanto qabato. Inkastoo uu ku guuleystay Champions League xilli ciyaareedkii hore Zidane, iyo horyaalkiisi ugu horeeyay ee La Liga tan iyo 2011-12, arintaan ayaa u muuqatay mid bilawga ah. Balse, waxaay noqon kartaa dhamaadka Zidane.
Tababaraha Faransiiska waa ciyaaryahan dhiirogelin leh oo macalin ah. Ma ahan wax xeelad xeelad ah, si kastaba ha ahaatee, kooxdiisuna waxaay ku tiirsan tahay shakhsiyad gaar ah inta badan sii ay ugu gueleysato.
Dhanka kale Marka dib loo jaleeco Dhibatadda Zidane oo aan aheyn mid hadda soo bilaabatey.
Lix bilood ayaa kasoo wareegatay markii James Rodriguez uu kooxda Real Madrid isaga tagay kuna biiray Bayern Munich haatana go’aankaas wuxuu noqday mid sax sanaa.
Waana isla mudada uu macalin Zidane dhibaatada bartana kaga jiro sidoo kalena ay ku qaadatay inuu fahmo muhiimada uu James kooxdiisa u lahaa.
Hada Zidane waa dhibane qof walbana wuu iska hilmaamay inuu labo Champion xariir ah Real Madrid u qaaday intaasna waxaa usii dheer in haatan 16-dhibcood hogaanka La Liga Barcelona kaga heyso.
James Rodriguez wuxuu sheegay inuu jeclaa sii joogista Real Madrid balse uu macalin Zidane ka dareemay inuusan u baahneyn.
James wuxuu yiri “Hada taageerayaasha waxay macalin Zidane weydiinayaan sababtii uu aniga iyo Morata inoo fasaxay, jawaab kale ma haayo oo aan ahayn inuu tiisa kusii dhagnaado!”
James waqti wacan wuxuu la qaadanayaa kooxda Bayern Munich oo hogaanka Bundesligaha 13-dhibcood ku hayaan.